हामी कसरी वामपन्थी होइनौं ? -दीपकराज जोशी ( विचार ) « Niatra TV
हामी कसरी वामपन्थी होइनौं ? -दीपकराज जोशी ( विचार )
काठमाण्डौ,पौष १६ । आखिर हामी व्यक्तिगत र सामाजिक रूपमा सुस्वास्थ्य रहन चाहन्छौं । हामी सबै बिरामीभन्दा स्वस्थ, गरीबभन्दा धनी, कमजोरभन्दा बलियो, कैदभन्दा स्वतन्त्र हुन चाहन्छौं ।